WAQTIYADA SHAKHSIGA GERMAN, SHARAFTA SHAKHSIGA
Casharkaan, waxaan ku baari doonnaa magac u yaalka Jarmalka. Magacyada shaqsiyadeed ee aan ku naqaano qaab Jarmal I adiga iyo annaga ayaga ayaa ah ereyo loo istcimaalo si waafaqsan iyaga halkii laga isticmaali lahaa magacyo ku habboon ama guud.
Magacyada Jarmalku guud ahaan waa mowduuc xukun, sida kan Turkiga oo kale. Sidaa darteed, waa lagama maarmaan in si buuxda loo barto magac u yaalka Jarmalka. Af Turki ahaan, magac u yaalka shaqsiyadeed waa ereyada I, adiga, isaga, annaga, adiga, iyaga. Tan iyo markii uu jiro hal magac uyaal ah "o" oo af Turki ah, waxa aan ka hadlaynaa waa seddexda dhanba, ha noqdo mid lab, dheddig ama jinsi la'aan.oWaxaan isticmaalnaa magaca
Turki ahaan, waxaan sidoo kale u isticmaalnaa magaca 'O' bini-aadamka, waxaan u isticmaalnaa magac 'O' xayawaanka, waxaanna u isticmaalnaa magac 'O' waxyaalaha aan nooleyn ama waxyaabaha jira. Laakiin magac-u-yaalka Jarmalka, dhiggiisa magac u yaalka "o" wuu uga duwan yahay magacyada lab, dheddig iyo lab iyo dheddig Tusaale ahaan; Turkiga dhexdiisa, waxaan u adeegsan karnaa magaca "o" lab iyo dhadig iyo hay'adaha aan nooleyn labadaba.
Tusaale ahaan, halkii weedha ah "Waan arkaa buugga", waxaan dhihi karnaa "waan arkaa", waxaan sidoo kale ku dhihi karnaa af Jarmal, laakiin weedhan "unMarka loo eego galmada waxa aan uga jeedno magac er-si-es waxaan u baahanahay inaan isticmaalno magac u dhigma ku habboon. Magacyada lab iyo dheddig ee magacyada shaqsiyadeed ee Jarmalka er ku dhawaaq sie ku dhawaaq magacyada galmada es ku dhawaaq.
Markii laga hadlayo shaqsiyaadka ama magacyada gaarka ah er-si-es Mid ka mid ah dhawaaqyada ayaa la adeegsadaa. Ogeysiisyada waxaa loo isticmaalaa ragga waxaana dhawaaqyada xamuulka loo adeegsadaa dumarka. Tusaale ahaan, Muharram, Omar, Samet maxaa yeelay waa magacyo rag oo meeshooda ku yaal er ku dhawaaq. Zeynep, Melis, Maryan maxaa yeelay waa magac dumarka magacooda sie ku dhawaaq. Ku dhawaaqida waxaa loo isticmaalaa noolaha galmada. Si kale haddii loo dhigo; "er" waxaa loo isticmaalaa halka laga isticmaali karo magacyada leh maqaalka, "sie" waxaa loo isticmaalaa halkii laga isticmaali lahaa magacyada leh maqaalka, "es" waxaa loo isticmaalaa halkii laga isticmaali lahaa magacyada leh maqaalka das. Sidaad u aragto, adeegsiga magac u yaalka Jarmalku waxyar ayuu kaga duwan yahay adeegsiga magac u yaalka Turkiga.
Aynu si wada jir ah u muujiso Bayaanka Shakhsiyeed ee Jarmalka:
Arrin kale oo ay tahay inaan xusno ku saabsan magacyada Jarmalka; sida kor lagu soo arkay sie Magaca ayaa la qoray seddex jeer. ugu horeysay sie ku dhawaaq dhinac saddexaad taasi waa magacu Laga bilaabo kiiska kale ee hoose sie Ciise jamac gudaha turkiga waxay waa u dhigma magac u bixid. Laga bilaabo xarafka ugu dambeeya ee ugu dambeeya Aug ku dhawaaqa dadka aadan dhihi karin naxariis leh si loo isticmaalo.
Tusaale ahaan, waxaan ulahadalnaa macalinkeena, maamuleheena, odayaashayada sida adiga oo kale ah, maahan adiga. Waxaa loo adeegsaday ujeedadan Aug magacu waa had iyo jeer caasi. Jarmal sie Waxaan u muuqanaa inaan maqalno waxaad dhahdo nas howl sida loo kala sooco “maxaa yeelay magacu wuxuu leeyahay hal macno in ka badan. Aan ka jawaabno hadda.
Jumlad ahaan go'doomin - Sie Markaad aragto dhawaaq, waxaan eegaynaa iskuxirka iskuxirka falka si aan u fahamno cidda - waxa loola jeedo. Isku-xidhka fal-celinta; Waxaan fahansanahay in dhawaaqa loo adeegsaday dareenka “waa,, haddii loo adeegsaday macnaha“ iyaga, ama haddii loo adeegsaday macnaha “adiga”. Horey loogu adeegsaday ulajeeddooyinka "Soco magac" maxaa yeelay xarfaha hore ayaa had iyo jeer la soo koofiyaa, haddii (inkasta oo aan ahayn bilowga jumladda) eğerAug" ku dhawaaq ka dib waxaan si fudud u fahmi karnaa in loo adeegsado cabashada fudud. Markaad fiiriso tusaalayaasha jumlada ee aan ku siindoono daqiiqad, waxaad si fiican u fahmi doontaa maadada.
Casharradeennii hore, waxaan ku barannay qeexitaannada asaasiga ah ee Jarmalka iyo weedhaha sida "kani waa buug, kani waa miis". Hadda waxaan baranay magac ubixinta shaqsiyeed, aan baranno sameynta jumlado sida "Waxaan ahay macalin, waxaad tahay arday, isagu waa dhakhtar" isla qaabkan. Weedhahan i-sen-o Erayaduhu waa hal qof oo ku dhawaaqa.
Aynu siino tusaale muuqaal ah magacyada Jarmalka. Muuqaalka hoose wuxuu bixin doonaa faham wanaagsan oo ku saabsan mowduuca.
Hadda aan baranno sida loo dhiso jumladaha sida "Waxaan ahay macallin, waxaad tahay arday, isagu waa dhakhtar". Weedhahan i-sen-o Erayaduhu waa hal qof oo ku dhawaaqa. Dhismaha jumladaha noocan oo kale ah, sida Ingiriisiga (tusaale ahaan, am-is-are), ficillo kaalmeeya ayaa loo isticmaalaa. Hadda aan aragno ficillo gacan-ka-caawin ah oo loo adeegsado Jarmalka iyo aragtidooda iyadoo la raacayo magacyada shaqsiyeed.
Waa in la ogaadaa in shaxda soo socota ay tahay in si fiican loo xusuusto. Sidoo kale eeg tusaalayaasha miiska soo socda. Weedhaha tusaale ahaan, Magaca qofka u horeeya oo ay ku xigaan fal falcelis ah ka dibna magac. Qaabka xukunku waa sidan. Dhinaca midig shaxda waxaa ku yaal tusaalayaal xukunno lamid ah Ingiriisiga. Si taxaddar leh u fiiri shaxda soo socota.
Shaxda kore, tusaalooyinka waxaa lagu bixiyaa qaab fudud oo ah jumlado lagu abuuray iyadoo la adeegsanayo magacyada magacyada Jarmalka. Waxaad sidoo kale samayn kartaa jumlado kala duwan oo iskaa ah oo aad adigu ku tababbarami karto. Markii aad sii korodhsato, dhaqso iyo sahlan ayaad baran doontaa magacyada Jarmalka ee shaqsiyeed.
Aan ku siino hal miis oo magacyada Jarmalka hal mar, waad daabacan kartaa boggan hadaad rabto.
WARKA QARAMADA AL-SHARE Turkish ah
sie O (DADKA DADKA WAALIDKA)
es O (DADKA WAAWEYN)
Aug Adiga (HALAD HITAP)
Jarmal shakhsi ahaaneed:
ich: aniga (H)
du: adiga (Di)
er: o lab
go'doomin: o (dhedig)
es: o (waa) (nooc dhexdhexaad ah)
Wir: annaga (V)
Adiga: adiga (IGR)
sie: iyaga (Suu :)
Xaashi: adiga (zi :)
Saaxiibbada qaaliga ah, haddii aan si kooban u soo koobno ​​magac u yaalka shaqsiyadeed ee Jarmalka, sida kor lagu arkay, magac u yaalka Jarmalka ee sie wuxuu leeyahay macno dhawr ah oo kala duwan. Macnahan oo laga soo qaatay koorsada xukunka ama isku xirka falka iwm. suurtagal in laga saaro Muhiimadu waxay tahay inaad sifiican hada u garaneyso ereyadan hada.
Waa inaad sidoo kale xasuusnaataa in magacyada kor lagu soo sheegay, Sie pronoun, oo loo isticmaalo kaliya qadarin qadarin leh, ayaa lagu qoraa qeybta sare halka kan kalena la adeegsado. Waxaan badanaa u isticmaalnaa sheybaar jilicsan si aan uga hadalno dadka da'da ah ama dadka aan aqoon. Haddii aad baartid oo aad barato tusaalaha jumladaha ku saabsan dhawaaqyada Jarmalka ee kor lagu soo sheegay, wax dhibaato ah kuma qabtid.
Tags: 10. fasalka nasiibka mawduuca, 9. fasalka nasiibka mawduuca, 9. Magacyo heer sare ah, Jarmal anigu waxaan ahay adiga, casharada alman, magacyo u dhigma, layliska luuqada ee german, casharka alman ee aduunka, almanu wuxuu u taagan yahay mawduuca mawduuca, magaca germany, magacyo u dhigma, magacyo